कांग्रेसका पूर्व सांसदले डाक्टरलाई कुटे - Everest Dainik - News from Nepal
कांग्रेसका पूर्व सांसदले डाक्टरलाई कुटे
कञ्चनपुर, असोज २७ । नेपाली कांग्रेसका एकजना पूर्व सांसदले डाक्टरमाथि आक्रमण गरेका छन् । २०७० मा भएको निर्वाचनमा कञ्चनपुरबाट विजयी भएका पूर्व सांसद दिवानसिंह बिष्टले डाक्टरमाथि आक्रमण गरेका हुन्।
विष्टले श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरीमा कार्यरत डा. अमित पण्डितलाई कुटपीट गरेका बताइएको छ । शुक्रबार बिहान उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र नजिकैको थलकेदार क्लिनिकमा ल्याइएकी २५ वर्षीया चन्दा थापाको स्वास्थ्य स्थितीमा सुधार नभएपछि पूर्व सांसद विष्टले आफूमाथि कुटपीट गरेको डा. पण्डितले बताए।
याे पनि पढ्नुस काँग्रेस नेता खड्कालाई मातृशोक
विष्टले स्वास्थ्य केन्द्र अगाडिको रोडबाट पिट्दै आफूलाई कार्यालय सम्म पुर्याएको डा. पण्डितले बताए। डाक्टरमाथि कुटपीट गर्नुको कारण भने खुलेको छैन् । कुटपीटको घटनाप्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै श्रीपुर स्वास्थ्य केन्द्रले दोषीलाई कारवाहीको माग गरेको छ।
ट्याग्स: Diwansingh Bist, doctor, Kanchnpur, Nepali congress